घरमा पालेको बिरालोका कारण यी महिला गर्भवती भएपछि….. – Classic Khabar
घरमा पालेको बिरालोका कारण यी महिला गर्भवती भएपछि…..
July 28, 2021 199
बिरालोको कारणले गर्भवती भएको भन्दा तपाईलाई पनि अचम्म लाग्यो होला । हामीलाई पनि यो कुरा एक ब्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा भनेको देख्दा अचम्म लाग्यो । घरमा पालेको बिरालोका कारण आफ्नो श्रीमती गर्भवती भएको भन्दै एक पुरुषले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिब्यक्ति अहिले भाइरल भएको छ ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार अनुसार उनको घरमा पालेको बिरालोले गरेको एक हर्कतका कारण श्रीमती गर्भवती भएकी हुन् । तर यसमा कुनै नकारात्मक कुरा भने नसोच्नुहोला । ति पुरुषका अनुसार बिरालोले कण्डममा प्वाल पारिदिएको कारणले उनीहरुको सन्तान नजन्माउने योजना विग्रिएको हो ।
प्वाल परेको कण्डम प्रयोग गर्दा श्रीमती गर्भवती बनेको ति व्यक्तिले बताएका छन् । उक्त व्यक्तिले आफू एक बच्चाको पिता भएको बताएका छन् । उनीहरुले लकडाउनमा बच्चा जन्माउने कुनै योजना बनाएका थिएनन् । तर बिरालोले क’ण्डममा प्वाल पारिदिएपछि श्रीमती गर्भवती भएको बताएका हुन् । बाथरुममा राखेको क’ण्डम प्वाल पारिदिएपछि गर्भ बसेको उनको भनाई छ ।
Prevश्रीमान श्रीमती नै शिक्षक थिए, अहिले गाउँलेहरूले नै बनाइदिए भिख माग्ने
Next२ महिना अघि मात्रै भित्राएको प्रहरीकी छोरीलाई ६ लाख रुपैया नगद दाइजो नल्याएको भन्दै ससुरा जेठाजु मिलेर जे गरे …..
कोरो,नाले अहिले अझ कतीले ज्यान गुमाएका छन ? खुल्यो ड,रलाग्दो डाटा,सरकारले सिधा कुरा किन भन्दैन,आखिर लकडा,उन कसको लागी ? भिडियो हेर्नुहोस
डाक्टरहरुले भने, सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन, आफ्ना बालबालिकालाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन आग्रह
पाथिभरा माताको दर्शनगरी भदौ ७ गते सोमवारको राशिफल हेर्नुहोस्
सपनाको गो,प्य फोटो देखाउछु भनेपछी जे,ल पुगेका बिनयलाई जब पुण्यले यस्तो प्रश्न गरे (भिडियो सहित)
दिनभरी अर्कै केटा संग सुतेर आउथि राति एकलै सुत्थी,२ बर्ष सम्म मेरो श्रीमतीले मलाई छुन सम्म दिइन (1133)
हाम्रो सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी ओली, अब मिलेर एमालेलाई बलियो बनाउँछौं : भीम रावल (953)
शिल्पालाई सपोर्ट गर्दै प्रकाशलाई कडा जवाफ,कोहिलाई दारा निस्केको भन्यो कोहिलाई मानसिक समस्यामा पुरायो (भिडियो सहित) (858)
प्रचण्डलाई छोडेर एमालेमा फर्किएकी रामकुमारी झाक्री र योगेशले गरे यस्तो घोषणा (781)
रात दिन श्रीमानको शा रीरिक स म्प र्कको या तना सहन नसक्दा (748)
३ वर्ष पहिले बुवाको मृत्यु, अहिले आमा ले पनि संसार छोडिन् : बिचरा यी नाबालक हरुको बिचल्ली (707)
जस्तो गुरु तेस्तै चेला हुन किशोर खतिवडा,लक्ष्मीको कुनै हैसियत छैन श्रीजना वाग्लेलाई जथाभाबी भन्ने (भिडियो सहित) (702)
नायक किशोर खतिवडा आफुलाई गर्भवती बनाए भन्दै आरोप लगाउने लक्ष्मी गदाललाई भेट्न पुगे, भयो यस्तो बबाल (भिडियो हेर्नुस्) (669)
ओलीले राजिनामा दिंदै, ओलीकै प्रस्तावमा यी नेतालाई बनाउने भए प्रधानमन्त्री ! ओलीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्मकै नयाँ ! (659)
कन्चनको अस्पतालमा मृ,त्यु, बल्ल मुख खोलिन भा,वुक हुँदै अनिशाले वास्तविकता (भिडियो सहित) (635)
यिनै तामाङ हुन् जसले धामी बस्दा श्रीमती र छोरीको ह’ त्या गरे, अरु २ छोरी र आमाबुवा पनि थिए पालोमा, यसरी समात्यो प्रहरीले
कपिलवस्तुको चार पालिकामा यस्तो रोग फैलिएपछी भकाभक अस्पताल भर्ना हुन थाले बिरामी
क्यानेडियन नागरिकले पोखरामा बसेर गर्ने रहेछन् यस्तो लाजमर्दो काम, प्रहरीले लियो नियन्त्रणमा
भान्जी संग ओछ्यानमा भेटिएका मामाको उल्टै दादागिरी
यि दुई महिला जसले दिन्थे ग्राहक माथि यस्तो अफर,यिनीहरुले गर्ने काम देखेर सबैको होस् उड्यो !